Iintlanzi eziMthubi zombane | Ngeentlanzi
Olu hlobo lweentlanzi lukhetheke ngakumbi kwii-aquariums. Zimalunga neesentimitha ezili-13 ngokobukhulu kwaye zizolile kwaye zizolile, ukuba nje iimeko zetanki zilungile.
Los iintlanzi zombane otyheli unyana evela eLake Malawi eAfrika, kuba ziyintoni na iintlanzi zasemanzini.
Olu hlobo lweentlanzi lunokutya okunezinto ezininzi ezahlukeneyo, ezinokubandakanya, ukongeza kwizinambuzane, iminenke, iimollusks, krill kunye nezinye iintlobo zeshrimp, nangona kunjalo zinokutya esikalini, ulwelwe kunye nori.
Kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba i-aquarium efanelekileyo yolu hlobo lweentlanzi kufuneka ibe phakathi kwe-100 kunye ne-200 yeelitha zamanzi. Kuya kufuneka nokuba inde kwaye ibanzi ukuze ubuncinci iintlanzi ezi-4 zolu hlobo zihlale. Ngendlela efanayo, ubushushu bamanzi esinawo kwitanki leentlanzi kufuneka bube ngaphezulu okanye ngaphantsi kwe-25 degrees celcius kunye ne-pH kufuneka ibe phakathi kwe-7, 8 ne-8,9.
Ukuhombisa i-aquarium ungasebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zamatye ukwenza iindawo zokufihla ukuze izilwanyana zakho zidlale kwaye zifihle kwaye ungabeka ezinye zezityalo zasemanzini ezinje ngeeferns kunye ne-anubias. Ndikucebisa ukuba ungasebenzisi izityalo ezingcambu.
Kubaluleke kakhulu kwaye kubalulekile ukuba izilwanyana zakho zidade kwaye zihambe, ke indawo ye-aquarium ibaluleke kakhulu, kuba inokuba nezilwanyana ezinobundlongondlongo kunye nendawo ukuba indawo incinci. Gcina ukhumbula ukuba ichibi kufuneka lihlale likwimeko entle kakhulu yezempilo, kwaye ngaphandle kokutya okugqithileyo kuba zivela echibini elinamanzi acocekileyo kwaye ziqhelekile, ke azizukunyamezela ukungcola kunye nolondolozo olubi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Intlanzi eMthubi ngombane
Ndinetanki leentlanzi eline-algae, kunye ne-betta fish kwaye ndicinga ukuba le ntlanzi ye-beta ifuna ukutya intlanzi yam etyheli yombane